Amanqaku kaPaul Brenner kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UPawulos Brenner
Ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava kumajelo eendaba & nezolonwabo kunye nobunkokeli betekhnoloji, uPaul Brenner wasebenza kwiindima ezininzi ze-c-suite, kubandakanya icandelo likaMongameli kunye neNkampani eSebenzayo ye-Emmis. NjengoMongameli we-NextRadio/TagStation, umsebenzi wakhe ugxile kubuchule behlabathi ngokuvula iChip ye-FM kuzo zonke ii-smartphones zokulinganisa abaphulaphuli, ukuphuculwa kwamava omsebenzisi wemoto, kunye namaqonga okufakwa kwedatha kuyo yonke irediyo yosasazo. Ngo-2019, uPaul wajoyina Vibenomics njengeGosa eliyiNtloko leQhinga lokuncedisa ekuphuhliseni isicwangciso-qhinga sokuya-kwintengiso yesisombululo sentengiso sokuqala senkampani se-Audio Out-of-Home™. Emva kokuqaliswa ngempumelelo, uBrenner wanyuswa waba nguMongameli we-Audio OOH ukuba ahlole yonke imizamo ejikeleze umsebenzi wokuvelisa ingeniso kunye nentsebenziswano ehambelanayo kwaye kutshanje wajoyina iKomiti yoPhando ye-DPAA kunye neKomiti entsha ye-IAB Retail Media.
NgoLwesibini, Matshi 8, 2022 NgoLwesibini, Matshi 8, 2022 UPawulos Brenner
Sekukudala siyazi ukuba ingqayi yecookie yomntu wesithathu ayizukuhlala igcwele ixesha elide. Ezo khowudi zincinci zihlala kwizikhangeli zethu zinamandla okuthwala itoni yolwazi lomntu. Benza ukuba abathengisi balandele indlela yokuziphatha kwabantu kwi-intanethi kwaye bafumane ukuqonda okungcono abathengi bangoku kunye nabanokubakho abandwendwela iiwebhusayithi zophawu. Bakwanceda abathengisi-kunye nomsebenzisi oqhelekileyo we-intanethi - ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo ukulawula imidiya. Ke, yintoni ingxaki? I